သငျသညျယနေ့ဂိမ်းအားလုံးဂရပ်ဖစ်နှင့်အမာခံအရေးယူအကြောင်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်,သင်ပြန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ကစားရန်စိန်ခေါ်မှုနှင့်ပျော်စရာဖြစ်ကြောင်းဂိမ်းများကိုစိတ်ဝင်စားနေသောထွက်ရှိပါတယ်ကစားသမားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့ကတစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့အလုပ်ရှုပ်သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်မည်ဂိမ်းကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာနှိုးဆှသဘောထားတွေကိုရှိပါတယ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူလာကြ၏။ ကောင်းပြီ၊အဲဒီဂိမ်းကစားသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏ညစ်ညမ်းဂိမ်းများကိုစုဆောင်းခြင်းကိုအတူတကွထည့်သည်။ ဤရွေ့ကားညဥ့်ပြီးနောက်နာရီနှင့်ညဥ့်ပြီးနောက်အလုပ်ရှုပ်သင်စောင့်ရှောက်မည်သည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာကြည့်တိုက်အတွက်အရှည်ဆုံးဂိမ်းဖြစ်ကြသည်။, အကယ်၍သင်သည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဂိမ်းကစားခြင်းလောကရှိအိုင်ကွန်ဂိမ်းများကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်ရှိသောဤအမာခံအိုင်ကွန်လိင်ဂိမ်းများကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့မဟုတ်တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူနယ်ပယ်တွင်သင်အကြိုက်ဆုံးဖြန့်ချိဘို့မူရင်းဂိမ်းနှင့်အချို့သောရုပ်ပြောင်နှစ်ဦးစလုံးကိုဆက်ကပ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်,ဤဂိမ်းများတွင်ဂရပ်ဖစ်အားလုံးအကြောင်းပါလျှင်ပင်,သူတို့နေဆဲအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂိမ်းနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူလာမယ့်နေသောဂိမ်းအသစ်၏မျိုးဆက်သစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း,အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားလှုပ်ရှားမှုများကိုစမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျသေချာဒီညအပေါငျးတို့သဂိမ်းများကိုပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အောက်ကအပိုဒ်တွေမှာသူတို့အကြောင်းပိုပြောပြပါရစေ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်ဂိမ်းအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်းမြောက်မြားစွာသောစိတ်ကူးယဉ်မှုများ၊စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းများအားလုံးသည်ကစားသမားအားလုံးကတောင်းဆိုသောဂိမ်းများဖြစ်သည်။ သူတို့ကစိန်ခေါ်မှုဂိမ်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်စပ်စုသငျသညျစောငျ့ရှောကျလတံ့သောကြီးစွာသောချိတ်နှင့်အတူပုံပြင်များ၏ပုံစံအတွက်လာမယ့်ဖြစ်ကြောင်းနှိုးဆှဆုလာဘ်မှတဆင့်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ဤစုဆောင်းမှုထဲတွင်ရှာတွေ့သောဂိမ်းအချို့ကိုသင်ပြီးသားသိသောပုံပြင်များနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ ငါမဆိုအိုင်ကွန်ဂိမ်းမတိုင်မီကစားထားပြီးဖြန့်ချိအပေါ်အခြေခံပြီးအားလုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းရုပ်ပြောင်အကြောင်းပြောနေတာပေါ့။ လူကြိုက်အများဆုံးအချို့ထိုကဲ့သို့သောဆောင်ရွက်ချက်အဖြစ်ဂိမ်း၏ဗားရှင်း,ဂေါ်ပြားသို့မဟုတ်အသေကောင်ဆဲလ်တွေဖြစ်ကြသည်။ ပင်အဟောင်းဂန္ဂိမ်းများကိုဒီစုဆောင်းမှု၌ငုံခဲ့ကြသည်။ ဂိမ်းအမျိုးအစားကဘယ်လိုမျိုးလဲဒီအပူဆုံးမာရီယိုဂိမ်းအချို့ရဲ့စုဆောင်းမှုမရှိဘဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ တောင်မှဟောင်ကောင်တစ်ဦးဂိမ်းအဖြစ်ပြန်လည်ပုံဖော်ခဲ့သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသည်။
သို့သော်ငါတို့သည်လည်းဧကန်အမှန်အသင်အထင်ကြီးလိမ့်မည်ဟုအချို့သောအသစ်ကဂိမ်းရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့တညဉ့်လုံးကစားစောင့်ရှောက်မည်ကိုမူရင်းပုံပြင်များနှင့်အတူမူရင်းဂိမ်းရှိသည်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ငါတို့သည်သင်တို့ဂိမ်း၏ဤမျှလောက်များစွာသောဒြပ်စင်စိတ်ကြိုက်တံ့သောအချို့သောအစာပုံးဂိမ်းရှိသည်။ ဤရွေ့ကားဂိမ်းဤမျှလောက်ဇာတ်လမ်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်ဇာတ်လမ်းကိုကောင်းစွာတိကျမ်းစာ၌လာသည်မှတဆင့်ပေးအပ်သည်။ ဒါဟာသင်အားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှအရာရာအတွက်ပုံပြင်များနှင့်လက်ဖွဲ့ရှိသည်သောဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုးနှင့်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေအရာနေရာတိုင်းအခင်းအကျင်းနှင့်အတူတစ်နှိုးဆှစာအုပ်ကစားနေပါတယ်နဲ့တူရဲ့။
ပုံပန်းသွင်ပြင်လိင်ဂိမ်း၏ဤစုဆောင်းမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏ရုံအနည်းငယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အားလုံးအမျိုးအစားကနေဂိမ်းပူဇော်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားသူများ၏ပရိသတ်ကိုဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုလိုအပ်သမျှသောအဓိကကျတဲ့အမျိုးသမီး။ သင်အလွယ်တကူသင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုဂိမ်းကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သမျှသောသင်၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာထည့်လေ့မရှိသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းစွာဒီဇိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာကြည့်တိုက်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရှိသမျှဂိမ်းများကိုအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့လူတိုင်းအတွက်အခမဲ့ဒီဆိုက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်စီမံခန့်ခွဲပုံကိုတွေးမိ။ ကောင်းပြီ၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ပလက်ဖောင်းမှာကစားသမားတွေအများကြီးနေ့တိုင်းရနေတယ်။, ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုဒ္မွာဂိမ္းေတြအမ်ားၾကီးရွိလို႔ပါ။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့သူတို႔အားလံုးအခမဲ့ကစားႏိုင္လို႔ပါ။လူေတြကကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုသူတို႔ရဲ႕ နံပါတ္တစ္ဂိမ္းကစားနည္းတစ္ခုျဖစ္ေစတယ္ေလ။ ကျနော်တို့ဂိမ်းကစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှသူတို့ရဲ့ဂိမ်းကစားအချိန်ဖြုန်းကြောင်းသေချာအောင်၏ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကိုစွန့်ခွာစေနိုင်သောအင်္ဂါရပ်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။ ပထမဦးစွာကျွန်ုပ်တို့သည်ပေါ့ပ်ဖြင့်သင်၏ဂိမ်းကစားခြင်းကိုနှောက်ယှက်ခြင်းမရှိပါ၊ဂိမ်းကြော်ငြာခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိပါ။ က်ေနာ္တို႔လည္းေပးစရာ၊လွဴဒါန္းစရာေတာင္းစရာမလိုပါဘူး။ ကျနော်တို့ရုံကဒီမှာနဖူးစည်းစာတမ်းတွေ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးပေးဆောင်နေကြသူကိုအဓိကအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမှတ်တံဆိပ်ကြော်ငြာနေသောရှိပါတယ်။, အကြှနျုပျတို့သညျကိုမဆိုဘလူးတုသ်မရောင်းကြဘူးနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုပါရှိပါသည်နှင့်ကျွန်တော်ပူဇော်တိုင်းတစ်ခုတည်းဂိမ်းပျော်မွေ့သင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ အခမဲ့၊လုံခြုံပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်!
ဆင်တူပိုဆိုဒ်များ Pixel Porn Games